Maamulka Puntland Oo Deegaano Gobolka Sool Kamida Ah Ka Wada Qorshe Ay Ku Marin Habaabinayaan Diiwaangalinta Codbixiyayaasha Ee Gobolka Sool |
Maamulka Puntland Oo Deegaano Gobolka Sool Kamida Ah Ka Wada Qorshe Ay Ku Marin Habaabinayaan Diiwaangalinta Codbixiyayaasha Ee Gobolka Sool
Hargeysa(GNN)August.22,2016-Wararka aan ka helayno magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa sheegaya in maamulka puntland ay wadaan qorshe ay rabaan inay ku marin habaabiyaan diiwaangalinta codbixiyayaasha gobolka sool oo maalinta bari ah si rasmi ah uga bilaabmi doontaa dhamaan deegaanada gobolka sool.
Waxaana sida ay shabakadda Gabileynews u xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ay noo sheegeen in deegaano gobolka sool kamid ah ay joogaan xubno ay soo direen maamulka puntland kuwasi oo shacabka deegaanadaasi ku boorinaya inay taageeraan maamulka puntland isla markaana aanay qaadan kaadhka codaynta oo ay diidaan.
Xubnahan ayaa sida naloo sheegay waxay ka kooban yihiin 4 xubnood oo ka socda maamulkaasi,waxaanay deegaanada ay kamidka yihiin Xudun iyo Taleex ay ka wadaan qorshahaasi ay damacsan yihiin inay khal-khal ku galiyaan diiwaangalinta codbixiyayasha,waxanay kulamo hoose la qaateen sida la sheegay bulshada deegaanada.
Dhanka kale xukuumadda Somaliland ayaa iyadu heegan culus galisay ciidamada difaaca qaranka Somaliland ee ku sugan jiidda hore ee Somaliland,kuwaasi oo adkaynaya amaanka gobolka sool,sidoo kalena wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamada qaranka Somaliland ay gaadheen deegaano gobolka sool kamid ah oo ay ka bilaabmayso diiwaangalinta.
Ugu danbayntii gudida komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland oo ku sugan magaalada laascanood ayaa maanta u kala diraya deegaanadda gobolka sool gadiidkii iyo shaqaalihii ka hawl galayay diiwaangalinta codbixiyayaasha ee gobolka sool ka bilaabmaysa.